HALATRA LAVANILA TAO FARAFANGANA : Miisa 4 ireo nidoboka am-ponja, mpitandro filaminana ny iray
Taorian’ny fanadihadiana lalina nokarakarain’ny mpitandro filaminana mahakasika ny fahatratrarana lavanila mbola tsy matoy, milanja 400 kg tao Farafangana ny faran’ny herinandro lasa teo dia fantatra izao fa miisa efatra ireo olona naiditra am-ponja vonjimaika. 12 juin 2019
Tratra tao anatin’izany ireo tompon’entana, ireo mpividy ary koa ilay mpitandro filaminana niray tsikombakomba tamin’izy ireo. Raha ny fanampim-panazavana voaray avy amin’ny Lehiben’ny Kaomisaria Jean Rainizanadahy tao an-toerana dia manamafy ny fiambenana ireo vokatra lavanila izy ireo ankehitriny satria tsara marihana fa ny 22 jona ho avy izao no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny taom-piotazana lavanila ao amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana.
Raha tsiahivina ny tamin’ny taon-dasa dia efa betsaka ireo olona voasambotra sy naiditra am-ponja noho ny halatra sy tsy fanarahan-dalàna mifehy ny famoaham-bokatra. Raha ny tatitra voaray hatrany dia efa nodorana ampahibemaso ireo lavanila manta sarona, milanja 400 kg izay saika haondrana ireo. Efa vonona hanamafy ny fitandroana filaminana avokoa ny zandary ao an-toerana mandritra ny fiomanana amin’ny fisokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-piotazana lavanila.